हिमाल खबरपत्रिका | कतिन्जेल बेवारिसे ?
कतिन्जेल बेवारिसे ?
पछाडि पारिएका एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा जातिको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले संविधानको भाग २७ मा विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदले आयोग गठन सम्बन्धी ऐन पारित गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि यी आयोगहरूले पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् । २०७४ सालमा सबै आयोगको नयाँ ऐन जारी भएसँगै पुरानो ऐन अनुसार नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण आयोगहरू रिक्त भएका थिए । केही आयोगमा भने ऐन आउनु अगावै पदाधिकारीको पदावधि सकिएको थियो ।
सात आयोगमध्ये महिला, दलित, समावेशी र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा ५ चैत २०७५ मा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ती आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । सहयोग नगरेको भन्दै नियुक्तिको चार महीनामै गएको साउनमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.शान्तराज सुवेदीले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।
असोज २०७४ देखि रिक्त राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएको छ । आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले पदाधिकारी नहुँदा निर्णय गर्न र नियमावली बनाउन नसकेको बताउँछन् । “आयोगमा आएका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने नियमित काम मात्र भइरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिकमा मात्रै महिला हिंसाका ६५१ उजुरी परेका छन् । महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनकुमारी सुनार पदाधिकारी नहुँदा आयोगले सरकारलाई नीति निर्माणमा सुझाव तथा निर्देशन र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन नसकेको टिप्पणी गर्छिन् । “यति लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ”, उनी भन्छिन् ।
आयोगले पूर्णता नपाउँदा नीतिगत निर्णय गर्न र योजना बनाउन नसकेको अध्यक्षहरूको भनाइ छ । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीका अनुसार, अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठक बसेर आयोगहरूलाई पूर्णता दिन सम्बन्धित निकायहरूमा आग्रह गरिरहे पनि पहल भएको छैन । आयोगका पदाधिकारीका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।